Mashiinka Boos celinta ee ugu Fiican Websaydhkaaga Kireynta Fasax
Features » Mashiinka Boos celinta
Mashiinka Boos celinta si fudud ayaa la isugu dhafan karaa oo leh websaydhyo dhinac saddexaad ah si loo hubiyo in martida iman karta ay leeyihiin khibrad raadis siman. Muuqaalkan cajiibka ah wuxuu halkan u joogaa inuu kor u qaado beddelaaddaada oo aad u maareyso maamulka hantidaada heerka ku xiga.
Maaddaama goobaha liisaska khadka tooska ah iyo guddiyada OTAs ay sare u kici karaan 20%, taas oo inta badan u dhiganta qiyaastii 50% dakhliga soo gala maareeyaha kirada fasaxa ah, diiwaangelinta laga helay kanaalladan waa kuwo aad qaali u ah. Adiga oo ah milkiilaha ganacsiga kirada muddada gaaban, dabcan, waxaad jeceshahay inaad kordhiso faa'iidooyinkaaga adoo yareynaya qadarka lagu bixiyo guddiyada. Si kastaba ha noqotee, maahan wax fudud maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad qalab yeelato si aad sidaas u yeelatid!
Xitaa meelaha bixiyaasha guryaha loo adeego ay ka sameysteen degel si ay toos ugu diwaan galiyaan waxbadan kuma guuleysan, maadaama websaydhadooda aysan laheyn qiimayaal nool iyo helitaan isla markaana ay ku saleysan yihiin baaritaan. Isla mar ahaantaana, martida loo bartay inay si dhakhso leh u ballansadaan goobaha ballansashada waxay filayaan isla waayo-aragnimada websaydhada martida loo yahay.
Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha softiweerka oo ku siiya qiimayaal nool oo aad ku heli karto adoo isticmaalaya ballansi engine la'aanta qaar ka mid ah astaamaha aasaasiga ah. Qaar ka mid ah matoorada ballansashada waxay leeyihiin naqshad u muuqata inay ku xayiran tahay qarnigii la soo dhaafay. Kuwa kale ma awoodaan inay wax ka qabtaan guryaha unugyada badan leh. Intooda badan matooradan ballansashada ah awood uma laha inay u oggolaadaan martida inuu ka dhex raadsado guud ahaan guryaha martida loo kireysto ee fasaxa ah oo laga yaabo inay lahaadaan guryo ka badan hal magaalo. Waxayna u muuqataa wax aan macquul aheyn in la helo adeeg bixiye u oggolaanaya la socoshada saxda ah iyada oo loo marayo Google Analytics ama Google Tag Manager, laba qalab muhiim u ah ganacsi kasta.
Sidee Zeevou Mishiinka Boos-gacmeedku u caawin karaa?
Zeevou ahaan, waxaan fahamsanahay ahmiyada duubista tooska ah, ujeedkeena aan sheegnayna waa inaan keenno Kacaanka Dalbashada Tooska ah! Sidan oo kale, waxaa naga go'an inaan ku siino qalabka ugu fudud ee ka qaban kara shaqooyin muhiim ah warshadaha soo-dhoweynta. Tusaale ahaan, dhisida aaladaha awood u siinaya milkiileyaasha martigelinta ee nooc kasta leh inay si weyn u kordhiyaan saamiga ballansashada ay helaan iyadoon loo baahnayn dhexdhexaadiye lacag leh. Mashiinkayaga ballansashada ayaa markhaati u ah ballanqaadkan.
Mashiinkayaga ballansashada wuxuu jiidayaa sicirka nool iyo helitaanka, ha ahaado kuwa gacanta lagu soo geliyay ama noogu soo diray mid ka mid ah qiimaheena firfircoon la-hawlgalayaasha is-dhexgalka. Waxaa intaa sii dheer, waxaan u haynaa war wanaagsan kuwa martida loo yahay ee ka shaqeeya caalamka; mishiinkeena ballansashada xitaa wuxuu taageeraa dejinta lacago badan! Marka, looma baahna in laga walwalo wax ka qabashada lacagaha kala duwan.
Wada-hawlgalayaasha Zeevou ayaa dejin kara dar-ons si loo iibiyo badeecooyin ama adeegyo dheeri ah oo loo xirxiro kuwaas oo qayb ka ah qorshooyinka sicirka. Marti-geliyeyaashu waxay dooran karaan inay ku riixaan qorshe qiimeyn kaliya mashiinka ballansashada, si ay u bixiyaan heshiisyo gaar ah marka la barbardhigo bixintooda OTAs. Zeevou wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dejiso dallacaadaha, iyo shuraako nambarada foojarka in loo adeegsado mashiinka ballansashada gebi ahaanba bilaashka ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah muuqaalka mashiinka ballansashada ee Zeevou. Waad ku dhexgeli kartaa mashiinkeena ballansashada tooska ah Google Analytics si loola socdo taraafikada iyo dadka. Tani waxay kaa caawin kartaa faham wanaagsan of macmiilkaaga macquul ah. Intaa waxaa dheer, is dhexgalka aan la leenahay Maamulaha Google Tag waxay u oggolaaneysaa martida inay adeegsadaan matoorka ballansashada ee Zeevou si ay ula socdaan qulqulka websaydhka iyo ballansashada ay helaan. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay markaad iskudayeyso inaad ka shaqeysid soo noqoshadaada maalgashiga PPC-Pay per Click- Ololaha Google Ad.
Meel dhigid gabi ahaanba waa toos. Dhammaan martida waa inay sameeyaan waa inay ku daraan Magacooda Koowaad, Magaca Dambe, iyo Cinwaanka Emailkooda. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale ka codsan kartaa inay soo gudbiyaan lambarka Taleefoonkooda si ay ugu awoodaan inay ballan u yeeshaan. Yaraynta macluumaadka laga codsaday martida inta boos la dhigaayo waxay hubineysaa inaad qabsan karto xogta inta badan martida suurtogalka ah. Zeevou's 5-Habka Xaqiijinta Buugga waxay martida siineysaa dareen ah inay ballansadeen iyadoon wax dhib ah la arkin sidoo kale inay daryeelaan aruurinta ogolaanshaha suuq geynta GDPR, bixinta, dhigaalka amniga, iyo xaqiijinta aqoonsiga.
Kuwa aan rabin inay ka faa'iideystaan ​​bilaashka oo dhameystiran toos u dalbashada degelka oo ay bixiso Zeevou, matoorkeenna ballansashada waxaa si fudud loogu dhex dari karaa websaydhada dhinac saddexaad. Kooxdayada Zeevou waxay soo saareen a WordPress Widget, iyo sidoo kale iFrame oo lagu dari karo bogagga intarnetka badankood, oo ay ku jiraan kuwa ay bixiyaan Wix. Tani waxay martida si toos ah ugu weecineysaa ballanta Zeevou engine oo waxay u oggolaanaysaa martida inay dhigaan jaale waxyar oo keliya.
Nidaamka kobcinta ganacsigaaga adoo adeegsanaya muuqaalka mishiinka ballansashada ee Zeevou waa xanuun la'aan. Waxaa qoray codsanaya demo bilaash ah, waxaad ka heli doontaa fursad aad ku sahamiso kuwa kale muuqaalada in Zeevou ay bixiso oo ay ka caawiso meheraddaada inay hesho booskeeda suuqa tartankan. Ha iloobin in our kooxda taageerada ayaa halkan u jooga inuu ku caawiyo haddii aad wax su'aalo ah qabtid.